Yangoodsရှေးဒီဇိုင်း ဖန်ခွက်အောက်ခံအပြား - အနီရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး Kaymu စတိုး Kaymu ဖက်ရှင် Kaymu အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး Kaymu ဖုန်းများ Kaymu တက်ဘလက်များ Kaymu ကွန်ပြူတာများ Kaymu ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Kaymu ကင်မရာများ Kaymu ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ Kaymu အိမ်သုံးပစ္စည်းများ Kaymu စားသောက်ကုန်များ Kaymu ကားပစ္စည်းများ Kaymu အားကစားပစ္စည်းများ Kaymu ကလေးများအတွက် Kaymu ဘာသာရေးပစ္စည်းများ ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S ဖုန်းများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ (၈"အောက်) တက်ဘလက်များ (၈"နှင့်အထက်) ၀ိုင်ဖိုင်ကွန်ယက် ဖုန်းကွန်ယက် iPadများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အခြားပစ္စည်းများ TOP BRANDS APPLE SAMSUNG XIAOMI ACER WAINFORD ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ ကလေးများအတွက် အသုံးအဆောင်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ အားကစားပစ္စည်းများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ Yangoods ရှေးဒီဇိုင်း ဖန်ခွက်အောက်ခံအပြား - အနီရောင် Yangoods ရှေးဒီဇိုင်း ဖန်ခွက်အောက်ခံအပြား - အနီရောင်By Yangoods (2) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > Ks 3,900 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ Yangoods ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-7ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 4,52 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် မှတ်ချက်အားလုံးဆုရည်လှိုင်2016 ဒီဇငျဘာ2Yangoodsအရည်အသွေးကောင်းသလို ဒီဇိုင်းလေးတွေက တခြားနဲ့ မတူလို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် Yangoods အမှတ်တံဆိပ် ရှေးဒီဇိုင်း ဖန်ခွက်အောက်ခံအပြား ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ ရှေးဒီဇိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာမက လက်ဆောင်ပေးရန်ပါ အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ရှေးခေတ်လူနေမှုပုံစံကို ဖော်ကျူးထားသည့်ပစ္စည်းဖြစ်၍ ဧည့်ခန်းတွင် အလှထားရန်သပ်သပ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားသောကြောင့် သင့်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ၀ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm Online Shopping Mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းရည် ကြွယ်ဝသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ နှစ်ကာလအတော်ကြာ မြှုပ်ကွယ်နေသော ယဉ်ကျေးမှုပုံရိပ်များကို Yangoods မှ ပြန်လည်တူးဖော်ကာ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဒီဇိုင်းကို ၂၁ရာစု အမြင်နှင့်ကိုက်ညီအောင် တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဆန်းသစ်၍ တီထွင် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။အများနှင့်မတူ ဆန်းသစ်သည့် ဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် ဒေသထွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်း၊ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားသောပစ္စည်းများကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် အဓိကထား ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အိတ်၊ စာရေးကိရိယာ အစရှိသည်များကို ဒေသထွက်လက်ဆောင်အဖြစ် ဝယ်ယူနိုင်သည့်အပြင် အနုပညာလက်ရာဆန်းများကို မြတ်နိုးသူများအတွက်လည်း ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။၂၀၁၅ မေလ တွင် Yangoods ထုတ်ကုန်များသည် ဈေးကွက်အတွင်း စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် လူကြိုက်များ ရေပန်းစားလာသော ထုတ်ကုန်များ ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။အဓိက အကြောင်းအရာများရှေးဒီဇိုင်း ဖန်ခွက်အောက်ခံအပြားအနီရောင်Dimension - 9x9 cmအိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ၀န်ဆောင်ခပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် ရှေးဒီဇိုင်း ဖန်ခွက်အောက်ခံအပြား - အနီရောင် SKUYA008FA0WB0TSNAFAMZ မော်ဒယ်လ်YG2P6305R Weight (kg)0.2 ColourRed Main materialCeramic ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ပြီးအဆင်မပြေလျှင် ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသလား? ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူပြီး အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတရာ ရှိပါက သင်လက်ခံရရှိသောနေ့မှ စ၍ ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့ပြီး ငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။